laacib » Liverpool & Watford Oo Dhibcaha Kala Qaatay Kulan Waali Ahaa Oo Lix Gool La Iska Dhaliyay & Miguel Britos Oo Wadnaha Qabtay Jamaahiirta Reds.
Liverpool & Watford Oo Dhibcaha Kala Qaatay Kulan Waali Ahaa Oo Lix Gool La Iska Dhaliyay & Miguel Britos Oo Wadnaha Qabtay Jamaahiirta Reds.
Sadex gool oo ay kala dhaliyeen weeraryahanada loogu magac daray MSF – Mane, Salah & Firmino iyo sadex gool oo ay Watford u dhaliyeen Okaka, Doucoure & Miguel Britos ayaa kulankii u dhaxeyay labada kooxood ee Watford iyo Liverpool kusoo dhameeyay barbaro 3-3 ah iyadoo Jurgen Klopp iyo wiilashiisa ay dhibic qura ka qaateen Vicarage Stadium.
Goolhaye Simon Mignolet ayaa awoodi waayay inuu waqtigii dhimashada kooxdiisa ka difaaco kubad dhinac gal aheyd inkastoo mid ka mid ah xidigaha Watford uu dhex taagnaa garab dhaaf walow la ansixiyay goolka.
Lix gool ayaa la iska dhaliyay wuxuuna kulankaan noqday midkii labaad ee goolasha ugu badan la iska dhaliyay madama kulankii Emirates Stadium la iska dhaliyay 7-gool.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay jawi dagan labada kooxoodna waxey ahaayeen kuwa aan si fiican isku tijaabin daqiiqadaha ugu horeeya mana ciyaarin kubad joog hoose ah. Marco Silva & Klopp ayaana durba xidigahooda ku bilaabay canaan.
Daqiiqadii 5-aad: Roberto Pereyra ayaa u dhawaaday inuu hogaanka u dhiibo Watford markii uu kubad ku helay afka hore xerada ganaaxa, laba ciyaartoy ayuu u gooyay balse kubadii uu goolka la eegtay waxaa isku dhigay Lovren.
GOAL: Daqiiqadii 6-aad: Okaka ayaa hogaanka u dhiibay Watford markii uu si awood leh madaxa ugu dhameystiray kubad koornada bidix ka timid, goolhaye Simon Mignolet ayaana awoodi waayay inuu badbaadiyayo.
Xidigaha Liverpool ayaa hurdada ka kacay waxeyna bilaabeen iney durba sameeyaan dadaalo ay ku doonayaan iney isaga soo gudaan goolka lagu leeyahay walow daafacyada Watford ay cadaadis aad u xoogan kala kulmayeen.
Tababare Marco Silva ayaa u muuqday mid ciyartoydiisa lasoo dar-daarmay madama ay si cadaadis ah u raacanayeen sidoo kalana aysan siineynin Mane, Salah iyo Firmino fursad yar oo ay ku neefsadaan.
GOAL: Daqiiqadii 29-aad: Sadio Mane ayaa si awood iyo xamaasad leh gool barbaro ah ugu keenay Reds markii uu si awood leh kubad ula qeybsaday Henderson iyo Emre Can – si qurux badan ayuuna u daba mariyay goolka.
GOAL: Daqiiqadii 32-aad: Watford ayaa mar kale hoganka u qabatay ciyaarta markii Doucoure uu si fudud shabaqa ugu leexiyay kubad ay awoodi waayeen daafacyada Reds iney iska celiyaan oo laga keenay dhanka midig.
Daqiiqadii 37-aad: Mohamed Salah ayaa helay fursad uu barbaro ugu keeno Reds markii uu kuabd la galay xerada ganaaxa, balse markii uu ka hortagay goolhayaha ayuu hawada sare mariyay.
Daqiiqadii 44-aad: Sadio Mane ayaa u dhawaaday inuu gool barbaro ah u dhaliyo Liverpool markii uu madaxeeyay kubad koornada midig laga soo qaaday, birta geeskeeda ayuuna mariyay.
Qeybta hore ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-1 oo ay ku hogaamineysa Watford xilli ciyaarta qeybta hore badal looga saaray xidiga reer Holland Daryl Janmaat kaaas oo dhaawac noqday.
Qeybta labaad ee ciyaarta ayaa la isku soo laabtay iyadoo labada kooxood ay kusoo galeen labaadii shax ee bilowgii la doortay, Marco Silva & Jurgen Klopp ayaana aaminay mar kale xidigahii ay kusoo bilaabeen.
Liverpool ayaa durba cadaadis ku bilowday goolka Watford si ay goolka isaga soo gudo, Mane & Salah ayaana u muuqday kuwa si daran u dadaalaya, xawaarahoodana wuxuu ahaa mid aan caadi aheyn.
GOAL: Daqiiqadii 55-aad: Roberto Firmino ayaa gool u badalay rigoore lagu abaalmariyay Reds markii goolhaye Gomes uu dhulka dhigay Salah, si qurux badan ayuu xidiga reer Brazil u daba mariyay goolhayaha isagoo ciyaarta ka dhigay barbaro.
GOAL: Daqiiqadii 57-aad: Mohamed Salah ayaa hogaanka u dhiibay Liverpool markii uu si fudud u dhameystiray kubad uu goolhayaha ka dulqaaday Roberto Firmino. Reds hogaanka ayey la wareegeen markii ugu horeysay.
Daqiiqadii 63-aad: Alberto Moreno ayaa si fiican ugu dhex orday laba difaac ka hor inta uusan si awood leh goolka kubad joog sare u aadin balse goolhaye Gomes ayaa ka saaray kubad ku beegneed shabaqa.
Daqiiqadii 64-aad: Liverpool ayaa u dhawaatay iney gool kale hesho markii Matip uu madax xoog leh ku tuuray goolka balse birta kore ayaa ka beenisay, waxeyna aheyd koorne dhanka bidix laga soo qaaday.
Daqiiqadii 69-aad: Dejan Lovren ayaa isku dayay inuu xaaladda ku adkeeyo Watford markii uu madax dhul ku dhufasho ah ku tuuray goolka balse goolhaye Gomes ayaa si xarago leh u badbaadiyay.
Watford xidigaheeda ayaa sameeyay dadaalo ay ku dooneen iney barbaro uga helaan Liverpool, balse uma suuragalin. Amrabat ayaa dhawr jeer isku dayay inuu kubad ku qal-qal galiyo daafaca balse waa laga diiday.
GOAL: 90-daqiiqo: Miguel Britos ayaa wadno qabad ku noqday Liverpool markii uu dhaliyay gool daqiiqadahii dhimashada, Simon Mignolet ayaana u muuqday mid kooxdiisa badbaadin waayay – ciyaartana 3-3 ayaa laga dhigay.
Natiijada ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay barbaro 3-3, waxaana kulankii martida loo ahaa Watford la iska dhaliyay 6-gool, waana kulanka labaad ee goolasha ugu badan la iska dhaliyay madama kulankii xalay la iska dhaliyay 7-gool.
Jurgen Klopp iyo kooxdiisa waxey heleen hal dhibic, waxeyna u muuqdeen kuwa adkeysan waayay oo u mayal adeygi waayay goolashii ay dhaliyeen.